तारागाउँको सेयर विक्रीमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गोप्य डिल | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
तारागाउँको सेयर विक्रीमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको गोप्य डिल
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७५, आईतवार ०८:२० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार रोक्ने भनेर दिन दिनै अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला उनकै क्याबिनेका एकजना मन्त्री भने ठूलो घोटलामा संलग्न रहेको रहस्य बाहिर आएको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले तारागाउँ विकास समितिको बाँकी रहेको ३९ मध्ये ३० प्रतिशत शेयर व्यापारीहरूलाई बिक्री गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिएको स्रोतको दावी छ ।
समितिसँग अब ९ प्रतिशत मात्रै सेयर छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारीले तारागाउँ विकास समितिबाट सञ्चालित बौद्धको होटेल ह्यातका मालिकहरूलाई ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेका हुन् । झण्डै चारदिनसम्म होटेल ह्यातमा भएको रात्रिकालीन गोप्य डिलमा मन्त्री अधिकारीले करोडौं रकम चलखेल गरेका थिए ।
मन्त्री अधिकारीको पहलमा तारागाउँको ३० प्रतिशत सेयरलाई २४ अर्ब रुपियाँमा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसको कमिसन मात्रै २० करोड भन्दा बढि रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीसम्म कमिसन पु-याउनु पर्छ भनेर मन्त्री अधिकारीले प्रस्ताव राखेको स्रोतले थप बतायो ।
संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य र विकास समितिको सभापति हुँदा विवादास्पद निर्णयहरू गरेर आलोचित बनेका अधिकारीले गुपचुप रुपमा यति ठूलो डिल गरेका छन् । तारागाउँको सेयर बिक्रीको सेटिङ पूर्व डिएसपी गोविन्द परियारले मिलाएका थिए । पूर्व डिएसपी परियार ह्यात होटेलमा सुरक्षा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।
यसैबीच, पर्यटन मन्त्री अधिकारीले केही दिन अगाडि नयाँ बानेश्वरस्थित विजुलीबजारमा रहेको नेविसंघकी एकजना महिला कार्यकर्ताको पसलको उद्घाटन गरिदिएका छन् । पसल बिजुलीबजारमा रहे पनि नेविसंघकी कार्यकर्ता श्रीमती बेबी कार्की चापागाइँले उद्घाटन कार्यक्रम होटेल अन्नपूर्णमा राखेकी थिइन् । बेबीले पसलमा भारतीय ब्राण्डको हर्वलपुलका सामान बिक्री गर्छिन् । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापा पनि अथितिका रुपमा सहभागी थिए । ( यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक)
‘हेलो नेपाल’को लाइसेन्स खारेज!
काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । यो दूरसञ्चार कम्पनी अजेयराज सुमार्गी स्वामित्वको…
सांसदको उपचार बिल, १६ सयदेखि २ लाखसम्म
काठमाडौं । सांसदहरुले १० महिनाको अवधिमा ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ उपचार खर्चवापत बुझेका छन् । यसरी उपचार खर्च…
रेकर्डेट रक्तदातालाई पाँच किलोको बुद्धव्दारा भव्य सम्मान
काठमाडौं ।नेपालका रेकर्डेट रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्य सात संस्थाद्वारा संयुक्तरूपमा सम्मानित बनेका छन्। काठमाडौंको कालिमाटी स्थित चोकमा बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको…
तयार भयो छोटो सडकः अब काठमाडौंबाट चीनको केरुङ ४ घण्टामै पुगिने
काठमाडाैँ । नेपाली सेनाले रसुवाको मैलुङ देखि स्याफ्रुसम्म डबल लेनको १७ किलोमिटर सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ। १७…
कम्युनिष्ट सरकारसँग आत्तिएपछि भारतको अर्को ‘उपद्रो’, के गर्याे भारतले हेर्नुहाेस !
काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार स्थापनासँगै आत्तिएको भारतले आफ्नो चीन नीतिमा फेरबदलको संकेत गरेको छ ।
मोटरसाइकल जुध्दा एकको मृत्यु, तीन घाइते
दमक । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत झापाको दमक–४ स्थित कृष्ण मन्दिर सडकखण्डमा मोटरसाइकल एकापसमा जुध्दा एकको मृत्यु भएको छ भने तीन…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो 26 views
उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात, वर्षा र हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित7views
फिफा विश्वकप फुटबल सुरु नहुँदै रुस विवादमा6views